Muqdisho: Khasaare Weyn oo Loo geystey Ciidamada Itoobiya
Wararkii: Nov 9, 2007
UN Ban Ki-moon won't send peacekeepers
Khasaare Weyn oo Loo geystey Ciidamada Itoobiya ee Jooga Muqdisho iyo C/Laahi Yuusuf oo gaarey Nairobi
Bannaanbax looga soo horjeedo Itoobiyaanka oo ka dhacay Muqdisho -Jimce
Xasuuq ay ciidamada Itoobiya u geysteen shacabka Muqdisho - Tirada dadka la diley oo la sheegay in ay kor u dhaaftay afartan qof...
Xoghayaga Guud ee Qaramaad Midoobey oo sheegay in Ciidamo UN ah oo loo diro Soomaaliya aysan macquul ahayn...
Ugu yaraan 9 Askari oo Itoobiyaan ah oo Khamiistii Lagu Diley Muqdisho
Muqdisho: Jimce Nov 9, 2007: Dagaallo aad u xoogbadan oo Khasmiistii dhex maray ciidamada Itoobiya ee jooga Muqdisho iyo kooxaha iska caabinta ee ka soo horjeeda joogitaanka ciidamadaas ayaa dhibaato weyn loogu geytey ciidamada Itoobiya.
Khasaaraha ugu xogga weyn waxaa ciidmada Itoobiya loo geystey shalay galab kaddib markii dagaal ka dhacay jidka 30-ka agagaarka Black Sea, halkaas oo la sheegay in lagu diley ugu yaraan 6 askarta Itoobiya, waxayna halkaas kaga carareen meydka 4 askari kuwaas oo xalay ku baryey jidka 30-ka aagga Black Sea.
Sioo kale Shalay ayey ahayd markii wadooyinka magaalada Muqdisho lagu jiidey meyd kale oo ah askari Itoobiyaan ah oo ku dhintay iska hor imaad ka dhacay aagga Suuqa Xoolaha halkaas oo lagu diley ugu yaraan 3 askari oo ah Ciidamada Itoobiya.
Waxaa wararku sheegeen in isku darka ciidamada Itoobiya ee la diley Khamiistii in ay tiradoodu gaareyso ugu yaraan 9 askari (3 Suuqa Xoolaha iyo 6 Jidka 30-ka) inkasta oo ay jiraan warar tibaaxaya in tiradu intaas ka badan tahay, ayna jiraan khasaare loo geystey gawaarida ciidamda ee Itoobiya.
Xasuuq Ka Dhacay Muqdisho:
Wararka laga helayo xaafado ka mid ah Muqdisho oo ah aaggagii ay shalay dagaaladu ka dhaceen ayaa waaberigii Jimcada la sheegay in lagu arkay meyd dad rayid ah oo ciidamada Itoobiya ay dileen, tirada rasmiga ah lama oga laakiin dad goob joogayaal ah ayaa ku sheegay in tirada dadka meydkooda la arkay lagu qiyaasay ugu yaraan 40 ilaa 50 qof iyo ka badan..
Wararka ayaa tilmaamay in dadkaas qaar loogu galay guryahooda, halkaasna ay ciidmada Itoobiya ku dileen dad shacab ah. Dhibka ugu badana waxa lagu soo waramay in ay u geysteen shacabka ka ag dhow suuqa xoolaha iyo Xamar Jadiid. Waxaana wararku tibaaxeen in dadka ay ciidamaad Itoobiya dileen in ay ku jiraan carruur iyo haween xaamilo ahayd.
Bililiqo ay geyteen Ciidamada Itoobiya:
Dhanka kale waxaa lagu soo waramay in Suuqa xoolaha dukaamo ku yaal ay xalay bililiqaysteen ciidamada Itoobiya ee aaggaas ku sugan, kana qaateen wixii lacag iyo hanti u oolaa shacabka. Waxaa kale oo wararku sheegeen in wixii aysan qaadan ay burburiyeen si xaasidnimo ah.
Askarta Itoobiya oo ah dal cadaawad dheer u dhexayso Soomaalida ayaa lagu yaqaan marka dagaal lagu jebiyo in ay xasuuqaan shacabka sida marar badan ka dhacda dhulka Soomaali-galbeed ee ay gumaystaan, dabeecadaas muddada dheer lagu yiqiina ayey la yimaadeen Muqdisho oo marka xooggaga iska caabintu ay jebiyaan ay dib ugu laabtaan carruurta iyo haweenka jooga xaafadaha ee aan waxba galabsan.
Dhanka kale wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in qax aad u ballaarini uu ka socdo qaybo ka mid ah Muqdisho. Barakac ugu xoogga weyn waxaa lagu soo waramay in uu ka dhacay Wardhiigleey, Hodan iyo Howl Wadaag. Dadka barakacaya waxay u badan yihiin carruur, haween iyo waayeel.
Bannaanbax xooggan oo looga soo horjeedio joogitaanka ciidamada Itoobiya ayaa maanta (Jimce) ka dhacay Muqdisho, gaar ahaan jidka 30-ka.
Dadka bannaanbaxayey oo isku yimid aagga Baar Ubax iyo Al-Baraka ayaa ku dhawaaqayey erayo dhan ka ah joogitaanka ciidamada Itoobiya ee dalka Soomaaliya, dadkaas oo xamaadaysan ayaa aad uga caraysan dhibaatooyinka ay ciidamada Itoobiya ku hayaan Soomaalida iyo joogitaankooda dalka Soomaaliya.
Xaaladda Muqdisho ayaa ah mid cakiran oo kacsan gaar ahaan aagagga Suuqa Xoolaha, Black-Sea, Al-Baraka, Xamar Jadiid, iyo Baar Ubax.
Maanta (Nov 9, 2007) waxaa 317 maalmood ka soo wareegtey markii ciidamada Itoobiya ay Muqdisho qabsadeen, waxayana hadda Muqdisho u muuqataa in uu ka soo ifbaxayo kacdoon cusub oo looga soo horjeedu joogitaanka ciidamada Muqdisho si ay u baxaan.
Dhanka Baydhabo, madaxweynaha DFKMG ayaa shalay galab ka dhoofay Baydhabo waxana uu xalay gaarey Nairobi, waxaana safarkiisa ku weheliya Cali Mahdi Maxamed.
Safarkan oo aan hore loo sii shaacin ayaa lagu macneeyey in C/Laahi Yusuuf uu Nairobi u tegey sidii uu beesha caalamka ugala tashan lahaa cidda laga dhigayo Ra'iisul wasaaraha DFKMG.
Cali Mahdi iyo Ra'iisul wasaare-nimada:
Dadka siyaasadda odorosa ayaa tilmaamay in haddii Cali Mahdi Maxamed loo doorto ra'iisul wasaaraha DFKMG ay shacabka Soomaaliyeed heli doonaan fursad ay Cali Mahdi wax kaga weydiiyaan in uu ka jawaabo eedaymaha ku saabsan Sunta halista ah ee la sheegay in Soomaaliya lagu duugey xilligii uu madaxweynaha ka ahaa Muqdisho, waana su'aal iyo fursad u furmi doonta weriyayaasha..
Shalay waxa magaalada Baydhabo yimid wafti ka socda beesha caalamka, kuwaas oo la hadlay baarlamaanka DFKMG, kaddibna ku laabtay Nairobi: HALKAN KA DHEGEYSO WIXII AY YIRAAHDEEN..
Wararkii hore ee: Dadweynaha Muqdisho oo ku ballamay in ay sii wadi doonaan banaanbaxyada
Banaanbaxayaaha ayaa waxay ku qaylinayeen ereyo ay ka mid ahaayeen �in Ciidamada Itoobiya ka baxaan gudaha dalka Soomaaliya� �Beesha Caalamaka ha eegaan dhibaatooyinka iyo tacadiyada ay ciidamada Itoobiya ku hayaan Bulshada Soomaliyeed�.